musha AFRAN FOOTBALL STORI Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yebhokisi yebhokisi inonyanyozivikanwa neNickname; 'Auba'. Our Aubameyang Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inokupa zvizere nhoroondo yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang akaberekerwa muLaval, France musi wa 18th waJune 1989 nababa vake veGabonese, Va Pierre François Aubameyang "Yaya", aimbova muGabonese muchengeti wechikwata uye amai veSpanish, VaMargarita Crespo Aubameyang, muridzi wemabhizimisi / bhizinesi mukadzi.
Aubameyang is a half cast ivo vanogovana vose vagari veFrance neGabonese. Pasina mubvunzo, maonero ake emakwikwi akavhenganiswa anooneka zvakajeka mumuviri wake wemuorivhi. Iwe haana kumbopedza hupenyu hwake hwehuduku muFrance neGabon paaikura. Akakurira muMilan, Italy apo baba vake vakashanda sechekuri ku AC Milan.
Pierre-Emerick Aubameyang akanga ari mwana wevakabudirira. Akanakidzwa nehutano hwakanaka hwehuduku, imwe iyo vakawanda vezera rake vaida. Kuva nebaba vemauto vemauto avo vanoitika kuva mutsara webhola kune rimwe remakwikwi makuru munyika yose zvinoreva zvakanakira Auba.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Baba vake (vakafananidzirwa pasi apa) vaiva nebasa rekuvandudza uye kuongorora tasha yebhora raAuba. Sezvo mukuru we AC Millan scout uye murume ane simba nekubatana kwakadzika mubhola, kuronga mwanakomana wake 3 nevashandi vake zvirokwazvo, yakanga isiri chinhu chakaoma.
Pierre-Emerick Aubameyang nevabereki -Mhuri yeMhuri
Izvo zvakakodzera kutaura kuti Mr Pierre François Aubameyang anozivikanwawo se "Yaya" aiva mumwe wevadziviriri veAfrica munguva yake yakatangira kubva ku1982 kusvika ku2002. Akashanda neboka reBabonese munyika yose muC1994 uye 1996 African Cup of Nations uye yakatambirwa nemapoka akawanda eFrance. Hope dzake dzinogara dziri kurera vanakomana vanozopfuurira nhaka yeAubameyang.
SaBaba SaMwanakomana- Iyo Aubameyangs Aubameyang's Mum- Margarita
ake amai, Mai Margarita Crespo Aubameyang kune rumwe rutivi rwave ruchiri rutsigiro rwemurume wake zvisarudzo kuti mwanakomana wake arambe ari kumativi ake ezvakaitika. Iye mukadzi wechiFrench wechiSpanish anobva.
Yaro yakakosha kuziva kuti ropa reSpain rinotenderera kuburikidza neAuba's veins. Guta raamai vake reEl Barraco (riri kumadokero kweMadrid) rakabudisa vateereri vanoverengeka vanoziva nezvemakore.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Iye Mhuri yeMhuri
Kubva kubva mubhola, 'Auba', iri kunzi seimba yemhuri yakakwana inoda kupedza nguva nemusikana wake Alysha nemwanakomana, Curtys uyo anozvitsaurira Spiderman uye mhemberero yebatman.
Maererano naAuba "Rudo chinhu chinonakidza mumhando dzaro dzose, asi, zvichida, kusiyana kwakasiyana-siyana uye kazhinji kisinganzwisisiki rwe rudo kunonzwa neAlysha uye Curtys"
"Akandipa simba rechokwadi," vakadaro baba vanozvikudza, vane mabheti kakawanda vanotakura zita remwanakomana wavo "Curtys".
Mumashoko ake, "Imba inowanikwa kumba ndeyangu mwanakomana wangu Curtys uye isu tose tinoona Batman naSpiderman paTV nguva nenguva"
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Bhora Hama
Ane vakuru vaviri vakwegura avo vadzidzisi vevheji. Ichokwadi, vose vatatu vakatanga mabasa avo ku AC Milan.
Zvausingazivi pamusoro peAubameyang Brothers
Apo Pierre-Emerick akabudirira, vamwe vachiri kutambura kuti vazive pasi rose. Mukoma wake mukuru Catilina zvakarewo nyika yeGabon, iyo yakaita zvishoma zvishoma pakati peC2000s, nepo Willy ari kune dzimwe nyika asi iye zvino ari kutamba muGermany pasi peague.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Mukomana wababa
Kusiyana nehama dzake, Auba ndiye baba vake vanovada. Haasi kungomuremekedza chete asi kutevera mazano ake pamusoro pebhizimisi uye nyaya dzemhuri.
Mukutaura kwebhizimisi, Bhodhi dzekutamba dzinosanganisira kutaurirana kwekutaurirana uye kusarudzwa kwekambani ndeyekuti baba vake vakuru vaite. Iwe, zvisarudzo zvakaitwa kusvika kure zvakabudirira. Somuenzaniso, pane imwe nguva St Etienne aida kutengesa Auba kuNewcastle. Baba vake vakaramba ndokuita mwanakomana wavo kubvumirana naDortmund kutumira. Maererano naAuba, "Takava wokupedzisira muChampions League nokuti baba vangu vakadzidza Jurgen Klopp Dortmund game, kunyange zvazvo mari yacho yakanga iri pasi."
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -The Speed ​​Perfect
Nhamba chinhu chakajeka iwe waizobatana naPaul-Emerick Aubameyang. Yake simba rake guru. Anokurumidza kukurumidza muzvishoma-uye-kwenguva refu uye anogona kutakura bhora zvakanaka panguva imwe chete. Akave akavharwa pa 30 mamita mu 3.7 seconds. Izvi zvakanzi ndeichikurumidza kupfuura mutevedzeri wemamita yeWorld Olympic 100 uye wenyika yose- Usain Bolt.
Kunyangwe, akave akapikiswa kune rimwe rudzi rwemamiriyoni e100 nomudzimai wechiGermany Julian Reus asi asati agamuchira dambudziko racho.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Basa Rokutanga
Muna 2007, akanyoreswa kupinda AC Milan chikoro nababa vake, gore iro maGiantali makuru eEurope mauto. Haana kutamba mutambo weRossoneri uye akakundikana kuzvisimbisa semutambo wechikwata chekutanga. Pane kudaro, akanzi akweretesa kumahombekiti eFrance akadai saDijon, Lille neMonaco. Muna 2011, akasainwa pachibvumirano chisingagumi naStein Etienne apo akawana 31 vavariro uye akatumidzwa kuti Ligue 1 African Player yegore ye2012.
Akanga ane kushandura-kushandura kusangana neChristian Galtier mudzidzisi weStart-Etienne. Maererano nemudzidzisi weFrance,
"Kunyange zvazvo zvisiri zvinhu zvose zvakanyatsofamba kwaAuba pakutanga. Ini ndakaona chinhu chimwe chete maari. Ndiyo kukurumidza kwake. Ndakaona panguva yekurovedza kuti ndiye akanga ari muteerese wepamberi wandakawana., "
Pazera re 20, Pierre akatamba chikwata cheFrance U-21 mushure mekunge adanirwa kuItaly U-19. Akatamira kuBrussia Dortmond kuGermany mu2013 uye akabuda mumwe wevarwi vepamusoro muBuddesliga. Akabatana neBVB mune imwe nhepfenyuro ye € 13 mamiriyoni.
Kunyange zvazvo Pierre akaberekerwa muFrance uye ari kutamba neGabon semutungamiri mukutsvaga kuti arambe achienderera mberi neAubameyang mutsara webhokisi iyo mukuru wake Catalina akanga aita. Anofara uye anokudzwa kuziva vana vake vachiedza kutevedzera ivo.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Kuita Nhoroondo
Aubameyang ndiye mutambi weGabonese kutamba muBundesliga kana chero imwe sangano reGermany. Akaita kutanga kwake muna August 10, 2013 mushure mekunge adzokera Dortmund munaJuly wegore iroro. Akava nehope yekutamba nekukanda chikwata chekuita mumutambo wake wokutanga, iyo yakatambirwa ne FC FCssburg.
Uyewo mumabhuku ezvakaitika, Muna July 2012, Aubameyang akaenda kuLondon kunomiririra Gabon pamitambo yeOlympic. Mumutambo wokutanga wakatarisana neSwitzerland akawana chinangwa choga chemutambo, icho chaizoguma chave chiri chinangwa cheGabon chaizoronga mumakwikwi. Ichi chaiva chekutanga cheGabboni uye chega chega chinangwa chakatorwa paOlympic. Vakatora zvigaro zve 19, Pierre-Emerick Aubameyang ndiye muGabon's goal goal scorer nguva dzose.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Cars
Zvichipiwa gamba renyika yeGabon on-field speed, zvinongova zvisikwa kuti aifanira kunakidzwa nehupenyu mukutsvaira kwacho zvakare.
Aubameyang's Love for classy cars
"Zvinonakidza zvine motokari dzakadai," iye anoti nezve Lamborghini Aventador yake yakavezwa. Aubameyang nhamba yemauto ingatowanikwa pamatairi emotokari yake, kunyange iye zvino ari kutungamirira Lamborghini.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Wonder Boots
Anowanzonzi Mr Glamorous. Aubameyang haasi iwe wepakati pemutambo nemuchina wekufungidzira, kunyanya kana paine zvipfeko.
Pierre-Emerick Aubameyang classy boots
Muna December 2012, aipfeka bhuti dzakapfigwa pamusoro peCNNXX Swarovski makristasi uye chigadzirwa chaisanganisira zita rake, nhamba nemakwikwi ake ane mavara uye mavara paanenge achidziya kumusangano neOlympique Lyonnais.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Anofunga kuti ndiye SPIDERMAN
Aubameyang akambosangana nazvo kana zvasvika pamhemberero dzepasherohero. Uku kunamatwa kwaSpiderman kwakafuridzirwa nemwanakomana wake Curtys uyo anowanzogara pachigadziko kuti aone hero yake iri kutamba bhora. Aubameyang akamboratidza mhemberero huru yemwanakomana wake mushure mekupihwa Dortmund mune 2014 Supercup neBayern.
Pierre-Emerick Aubameyang Spiderman Mhemberero
Mwanakomana wake mukoti mukuru wemashizha ebhuku rinotyisa uye anoda kuonekwa muSpiderman mask sababa vake.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Anofunga kuti ndiye BATMAN
Apo asingakwanisi kuwana spiderman zvigadzirwa zvake, anotendeukira kuBatman.
Auba ishamwari yegaga yeBatman. Anogara ari murume pamusangano wega wega wekushambadza akapfekedza nguo yeBatman kumwanakomana wake. Izvi zvinoramba zvichiita kuti vakawanda vashandise Kuramba uye Dark Knight.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Yakagadzirirwa kupfeka Mask panguva yekupemberera
Auba akamborayirwa nekupfeka chikafu cheNike-chakapiwa panguva yepemberera.
Masikati Mask Celebration
Izvo zvakanaka zvakange zvichitaurirwa kuva pakati pe € 50,000. Yakazove yakasimbiswa kuti masikisi yakatsaurirwa kuNike Hypervenom Phantom "Strike Night" bhoti raive akapfeka.
Dortmund mukuru mukuru Hans-Joachim Watzke akaudza Kicker magazini kuti: 'Hazviiti kuti iyo Nike yakanga iri kuedza kudzvinyirira mari mune izvi.'
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Rudo rweAfrica
Auba yeAfrica tatoo inoshongedza muviri wake uye inosimudzira mweya wake norudo rwekondinendi.
Hongu iye ariAfrica, kwete nokuti akazvarwa ari muAfrica, asi nokuti Africa yakazvarwa maari.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Anoda chete Football
Hungu anovhara Crystal shoes, Spiderman masks, Batman capes - pakutanga kuona. Pasina mubvunzo, Auba ndeye rudzi rwemhando yepamutambo.
Paunenge uchitarisisa, uchacherechedza kuti anorwisa haasi iye waunofunga kuti angave ari kunze kwechitambo. Maererano neshamwari yake yepedyo Christophe Jallet,
"Aubameyang ndiye mukomana akanyarara, uyo asingashanyi usiku masangano, haanwi doro uye nguva dzose anorota nezvebhola".
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Nyasha Style
Auba anonyanya kunetseka pamusoro pemakumbo ake. Ndiye mumwe wevashambadzi vemahombe avo vakaputsa nzvimbo yaPoorg Pogba. Pierre-Emerick Aubameyang akaisa Pauro Pogba chiziviso - kwete pamusana, asi nemutsara wemutsvuku.
Muridzi weHairstyle Best muBhola
Ane mvere yakagadzirwa pakati pevhora.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Summersault Master
Miroslav Klose akashandisa kuzviita, zvino Aubameyang anoitawo saizvozvo. Izvo zvaakaona. Pierre-Emerick Aubameyang ataura Sport Bild iye anoziva kuti mhemberero dzake dzomusika "Kwete kuipa" mushure mekukurudzirwa kumira neBotswana yeBhola Association uye vezvechiremba.
Ichokwadi, Auba anozvisarudzira pakarepo pashure pechimwe chega chinangwa kana kuti kwete kubvisa, asi anowanzoita kudaro mushure mekunge zvakakosha kuitika.
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -Kuremekedza Crespo
Ikoko hakuna mubvunzo chero mupiki wenyika muchengeti uyo akaisa zita romumwe mubhokisi muzvanza zvavo. Auba ichinhu chinopesana neizvi.
Tubao yeAuba yeCrespo
Anotakura chifananidzo chake, ndiye muchengeti weArgentina "Hernan Crespo" pachigaro chake chekuruboshwe. Mishumo inoratidza kuti Hernan Crespo inobatana naamai vake vanewo zita. Aubameyang ishamwari yekutenda yaHernan Crespo uye anomutumidza semuenzaniso wake mukuru mumutambo.
Maererano neAuba, "Crespo inosimba, yakasimba mumhepo, inyanzvi-ine zvipo uye guru remutambi," akaudza kicker. Auba anowedzera chikamu chemajeri ake mushure mekudzidzisa zvidzidzo achicherechedza unyanzvi hwekudzivirira hutsika hwe crespo.
Maererano naAuba, "Crespo tsanangudzo dzePoacher. Haawanzobatanidzi mukuvaka uye haarati kufarira zvikuru kumhanya mushure memitsara yekudzivirira. Anonyanya kufamba kamwechete kunze kwebhokisi. Asi mukati mebhokisi, anoziva kufamba. Anoziva kuti mabhora echipiri achaenda kupi. Anoziva kushandisa chero upi zvake huwandu hwenzvimbo yakasara mu6 yd box. Ndiri kudzidza zuva nezuva kuti ndive saiye. "
Pierre-Emerick Aubameyang Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts -LifeBogger Rankings
Takaita maererano nekuzivikanwa kwedu nhamba dzePierre-Emmerick Aubameyang.